May | 2019 | Radio Himilo
Maalinta caalamiga ee Tubaako la’aanta
Ahmed Haadi May 31, 2019
Himilo FM – 31-ka May maanta oo kale waxaa dunida looga aqoonsaday maalinta ka hortagga cabbistaTubaakada. Tubaakadu waxa ay dishaa in ka badan 8 milyan oo qof sannad kasta. In ka badan 7 milyan oo ka mid ah dhimashadoodu waa ...
Tottenham iyo Arsenal oo ku dagaalamaya xiddig garabka uga ciyaara Roma
Mahad Mohamed May 30, 2019
Himilo FM –Tottenham Hotspur iyo Arsenal ayaa wada doonaya ciyaaryahanka garabka uga ciyaara AS Roma Cengiz Under. Labada kooxood ee waqooyiga London ayaa la filayaa inay si firfircoon uga ciyaari doonaan suuqa kala iibsiga xagaaga, iyadoo la soo jeediyay inay ...
Gabar haddiyad loo siiyay badweyn maalinta jaceylka Shiinaha!
Himilo FM –Haweenay u dhalatay Shiinaha ayaa boggaga dhinaca Internet-ka ku soo qortay dareenkeeda ku aadan haddiyad ay ka heshay saaxiibkeed 20-kii bishan May oo kamid ah maalmaha la xusayo jaceylka dalka Shiinaha. Haddiyada oo ah tii ugu horreysay ee ...
Inter Milan oo kooxda ka dirtay Luciano Spalletti
Himilo FM –Inter ayaa xaqiijisay in tababaraha kooxda Luciano Spalletti inuu ka tagay kooxda maalmo yar ka dib markii uu geeyay Nerazzurri kaalinta afaraad ee horyaalka Serie A iyo Champions League xilli ciyaareedka soo aadan. Spalletti ayaa tagay San Siro ...
Philippe Coutinho oo loo soo bandhigay PSG
Mahad Mohamed May 29, 2019
Himilo FM –Paris Saint-Germain ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto Philippe Coutinho xagaagan, sida laga soo xigtay wargeysyada Spain. Barcelona ayaa keliya la saxiixatay Coutinho bishii Janaayo 2018, waxaana ay ku kharash gareysay lacagta rikoorka suuqa ...
Tottenham oo dalab u dirtay laacib ay dooneyso Man United
Himilo FM –Tottenham ayaa dalab u dirtay xiddiga kooxda Lyon Tanguy Ndombele, sida ay sheegayaan wararka. Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa waxaa doonaya kooxo badan oo ka dhisan Yurub oo ay ku jiraan Manchester United iyo Manchester City. United ayaa la ...
Sacuudiga: Shuruudaha guur ee gabar dhallinyaro ah oo dood laga keenay
Himilo FM –Dalka Sacuudiga, dood adag ayaa ka dhalatay shuruudo guur oo ay soo bandhigtay gabar islamarkaana loo arkay kuwa aan macquul aheyn sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi. Fowz Alcatiibi ayaa difaacday shuruudaha guurka oo ay shaacisay iyadoo tilmaamtay ...
Arsenal oo xiriir la sameysay AC Milan
Mahad Mohamed May 28, 2019
Himilo FM –Unai Emery ayaa lagu soo waramayaa in uusan ku qanacsaneyn goolhaye Bernd Leno, waxaana uu doonayaa inuu Gianluigi Donnarumma ka keeno kooxda AC Milan. Leno ayaa ugu biiray Gunners £ 19.3m xagaagii lasoo dhaafay, waxaana uu xilli ciyaareedkii ...
Himilo FM –Ardayda dalka Philipiness ee ka baxaya dugsiyada sarre ayaa ku qasban inay beeraan ku dhawaad 10 geed kahor inta aysan ka bixin dugsiga sida uu farayo sharci cusub. Sharciga dhawaan dhaladka ah ayaa dib u soo nooleynaya dhaqanka ...
FC Porto oo aqbashay inay daafac ka iibiso Atletico Madrid
Himilo FM –Porto ayaa ogolaatay inay ka iibiso Felipe kooxda Atletico Madrid heshiis 20 milyan oo Euro ah, sidaasi waxaa sheegay kooxda reer Portugal. Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa FC Porto kaga soo biiray Corinthians sannadkii 2016, waxaana uu ku guuleystay ...